1xBet Ubhaliso - Uyenza njani iAkhawunti entsha ye-1XBET?
Indlela Bhalisa kwi 1xBet
1xBet Bhalisa nge 1 Cofa
1xBet Bhalisa ngeFowuni
1xBet Bhalisa nge-imeyile
1xBet Bhalisa kunye Media Social
1XBET BHALISA ISIKHOKELO NGO-2022
Amanyathelo ukubhalisa kwi 1xBet
1xBet Registration iqhosha ibekwe kwikona ephezulu ngasekunene kwindawo. Ukuvula i-akhawunti kwi-1xBet yinkqubo eqhelekileyo, ongayi kudibana nabuphi na ubunzima. Ukuba ujonga phezulu ngasekunene kwendawo, uya kuqaphela iqhosha lokubhalisa eliluhlaza. Izakukusa kwiqela lenjongo yenkqubo, eya kukunika ezinye iindlela ezine - "Ukucofa kube kanye", "Ngenombolo yefowuni", "Nge-imeyile" okanye "Iinethiwekhi zentlalo kunye nomthunywa". Bona ngakumbi malunga nenye yezi ukukhetha eyona ndlela ifanelekileyo yokuvula iakhawunti yakho.
1xBet ubhaliso Quick ngokucofa kanye
1. I "NONE" ukhetho likuvumela ukuba ubhalise ngokwenyani ngonqakrazo olunye lwemouse okanye uchuku. Into ekufuneka uyenzile kukukhetha imali oyithandayo, chaza ilizwe lakho kwaye ungenise ikhowudi yokuthengisa ukuba unayo.
2. Cofa i "Bhalisa" iqhosha kwaye ngoku uya kuba neakhawunti.
3. Kule meko, iqonga livelisa ngokuzenzekelayo igama lomsebenzisi kuwe ngendlela yekhowudi enamanani asibhozo kunye negama lokugqitha elisibhozo. Ukuze kube lula kuwe, Inkqubo ikunikeza ukugcina ezi datha ngokuzithumela kwi-imeyile yakho okanye ngokuyigcina njengefayile yokubhaliweyo okanye umfanekiso.
4. Ukuba uthatha olu khetho, uya kushiya ukugqitywa kwedatha yeprofayile yakho kamva.
5. 1xBet iya kukuvumela ukuba udlale usebenzisa kuphela ezi kuthiwa "inkonzo" iinkcukacha, kodwa qaphela ukuba kusafuneka ubhalise iinkcukacha zakho ukuze utsale imali kwiakhawunti yakho xa uwinile. Ukuba unexesha, ingcebiso yethu kukuba uyenze ngoku.
1XBET BHALISO KUNYE CLICK
Ubhaliso NgeNombolo yeFowuni Kwi-1xBet
1. Unokufumana kwakhona ukungena okwenziwa ngokuzenzekelayo ngefowuni. Ukwenza oku, kufuneka ukhethe ukhetho lwesibini - "Ngefowuni" kwaye ufake inombolo yakho.
2. Inkqubo iqaphela ilizwe okulo kwaye ifaka ikhowudi yelizwe ngokwayo. Nje ukuba uthumele ulwazi, uya kufumana iinkcukacha zakho ngeSMS.
3. Apha kwakhona igama lomsebenzisi ngendlela yekhowudi yamanani kunye negama lokugqitha elinamanani kunye nonobumba.
4. Xa sele unazo ezi, ungazisebenzisa ukungena.
1XBET BHALISO NGEFONI
1xBet Registration nge-E-mail
Ukuba unqwenela ukugcwalisa iinkcukacha zakho, kufuneka ukhethe ukhetho lwesithathu - "Nge-imeyile". Apha iqonga liya kukuvumela ukuba usete iinkcukacha zakho ngokwakho. Kuya kufuneka ufake olu lwazi lulandelayo: Ilizwe, Inombolo yokuvula, I-imeyile, Inombolo yomnxeba, Imali, Amagama, Ikhowudi yokuthengisa (ukuba unayo).
Olu lolona guqulelo lupheleleyo lwenkqubo yobhaliso. Iyakuvumela ukuba uchaze igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha elifunekayo ukuze ungakhumbuli indibaniselwano eyenziwe ngokuzenzekelayo.
1UBHALISO XBET NGE-imeyile
1xBet Registration kunye Akhawunti Social Media
1UBHALISO XBET KUNYE SOCIAL MEDIA
Bhalisa nge 1xBet Mobile
Makhe sijonge ukuba ungabhalisa njani nge 1xBet mobile. Landela amanyathelo ambalwa alandelayo kwaye ekugqibeleni uya kuba neakhawunti yeselula eyenziwe.
1.Ndwendwela le dilesi ilandelayo: https://www://1xbet.com/en/mobile/
2. Phezulu uya kubona amaqhosha ambalwa. Eyesibini eluhlaza ithi "Bhalisa" iya kukusa kwifom yobhaliso.
3. Nje ukuba uyicofe, uya kubona iinketho ezimbalwa ezinokwenzeka ngokuxhomekeke kwindlela yobhaliso oyikhethayo.
Ngaphambi kokubhalisa nge 1xBet
Iqela lethu lihlala licebisa abafundi bethu ukuba bafunde imigaqo kunye neemeko zazo zonke izinikezelo ngokweenkcukacha. Kusebenza okufanayo kwimithetho kwiwebhusayithi 1xBet. Njengoko uqaphela, ngaphambi kokuba ubhalise, iqonga ngokwalo liya kukucela ukuba ufunde ngakumbi malunga nemimiselo. Apho uya kufumana imigaqo kunye nezibophelelo zakho njengomsebenzisi kwaye ufunde ngakumbi malunga nezibophelelo zombhuki kuwe.
Ngelixa imigaqo nemiqathango isemgangathweni, isengumbono olungileyo ukubanika ukujonga ukuze uzigcine unolwazi.
Ibhonasi yokubhalisa kwi 1xBet
Xa ubhalisa nge 1xBet, Uzakubanokhetho lokukhankanya inkqubo ukuba loluphi unyuso olukhethayo – 1xBet kaThixo wamkelekile ezemidlalo ibhonasi okanye yekhasino starter umnikelo. Kwinguqulelo epheleleyo yesiza, indawo yokhetho ibekwe ekhohlo kwiindawo zobhaliso.
Ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi kwezi zinyuso zimbini ozikhethayo, Inkqubo iya kukunika ithuba lokubhalisa kwaye emva koko uchaze unyuso olufunayo. Uyakwazi ukwenza oku kwimenyu yeprofayile yakho xa usenza idiphozithi yakho yokuqala.
Yintoni ebalulekileyo ukuyenza Xa Sine-Akhawunti ye-1xBet?
Nokuba yeyiphi indlela yobhaliso oyikhethayo, kanye ukuba uhambe ngale nkqubo, uya kuba sele unayo i-akhawunti odlala kuyo kwiwebhusayithi ye-1xBet. Usenokuba uqaphele ukuba inkqubo ilula xa kuthelekiswa nabanye ababhuki. Kubalulekile nje ukukhumbula iinkcukacha ukuze ukwazi ukungena ngaphandle kweengxaki. Enye into edibanisayo kukuba inkampani ikubonelela ngeendlela ezininzi zokubhalisa, kwaye unokukhetha ukusebenzisa iakhawunti yakho kwinethiwekhi yoluntu ukuze uzigcinele ingxaki yokuzalisa ulwazi.
Okanye, ukuba uyafuna, ungangenisa iinkcukacha zakho zobuqu kwi-akhawunti yakho emva kobhaliso ngokwalo. Oku kwenziwa kwi "Iprofayile yobuqu" imenyu yenkqubo, oza kuyibona kwikona ephezulu ngasekunene kwesiza xa sele ungenile kwiakhawunti yakho. Xa uyicofa, uluhlu oluhlayo luzakuvela phambi kwakho, apho kufuneka ukhethe khona ukhetho lwesine - "Iprofayile yobuqu".
Uya kubona ibhokisi yokufaka ulwazi lwakho. Uya kufuna eli nyathelo ukuba unqwenela ukutsala imali kwiakhawunti yakho okanye uthathe inxaxheba kuyo nayiphi na inkuthazo zombhuki.
Indawo yethu ngeelwimi ezahlukeneyo
1xBet Ubhaliso | 1xBet Khuphela